Chain Jiid, Cable Carrier, Chain Energy - Anjie
taxane MT (From 5mm * 5mm - 60 mili * 300mm)
MTK taxanaha (From 20mm * 30mm - 65mm * 300mm)
SK taxanaha (Laga soo bilaabo 25 mm * 38mm - 45mm * 150mm)
VMTK taxanaha (Laga soo bilaabo 25 mm * 30mm - 80mm * 300mm)
KJ taxanaha (10mm * 6mm & 10mm * 16mm)
VSK taxanaha (From 18mm * 30mm - 45mm * 100mm)
TUB taxanaha (From 40mm * 50mm - 50mm * 100mm)
taxane MTS (From 35mm * 50mm - 45mm * 250mm)
Cable silsilad - mTK
Cable silsilad - VMTK
Aragtidayadu waa si ay u xalliyaan masalooyin dadka isticmaala iyo kharashka loogu talagalay macaamiisha our mooyee. Tayada iyo adeegga waa fiirsashada weligeed ah.
Waxaan diiradda saaraan adeeg wanaagsan. adeegga tashi Sales iyo ka dib adeegga iibka. Waxaan ujeedadoodu tahay inay siiyaan waqtiga iyo macluumaadka saxda ah ee macaamiisha ama visitors our.
Tayada ugu horeysay waa fikrad. Waxaan saaray muhiimadda ay leedahay ka hor gacanta ku tayada. Isla mar ahaantaana waxaan isku dayaynaa dhib badan in la xakameeyo qiimaha our gudahood baaxadda macquul ah.
Waxaan helay waayo-aragnimo ka badan 13 sano wax soo saarka ee silsiladda jiita, rail guide hoos ku cover, nylon tuubooyin hoos ku jiingado iyo badeecadaha la xiriira.
Shirkadda Shijiazhuang dhiifoon u dhisan tan iyo 2008. Waxaan helay waayo-aragnimo ka badan 13 sano wax soo saarka ee silsiladda jiita, rail guide hoos ku cover, nylon tuubooyin hoos ku jiingado iyo badeecadaha la xiriira. waxyaabaha Our diiradda saaraan ilaalinta cable, ilaalinta rail dhaqaaq reciprocating ah.
Waxaan ka helnay 100 shaqaale iyo warshad ku taalaa gobolka Yanshan gobolka Hebei, oo helay oo ku saabsan aagga saarka 6500 mitir oo laba jibbaaran '. Xafiiskayaga ku yaal magaalada Shijiazhuang, meel 300 oo mitir oo laba jibbaaran '. Waxaa ku saabsan 400 mitir kilo ka Beijing ee goobta waa.
Iyada oo taageero ka macaamiisheena ka dibadda iyo gudaha, iyo dadaalka loogu jiro 13 sano hayo horumarinta ee tayada wax soo saarka iyo adeega wax soo saarka, waxa aanu qaar badan oo ka xoog badan qaadan in ay noqdaan kuwo khibrad ah in industry cable iyo guide ilaalinta tareenka.
ShanghaiTex 2019 qabsaday exibition in 2019.11.25
Customer weyddiiyey oo ku saabsan side cable ka. Xariirinta ka aragti iyo rakibaadda ee ...
100 mitir bari isgoyska u dhexeeya 307 wadada qaranka kaabayaal iyo wadada Tianshan, zone-teknoolojiyad sare, Shijiazhuang.
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist our, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan noqon doonaa in la taabto 24 saacadood gudahood
Cable Chain Jiid , Cable Wire Chain, CNC Cable Chain Jiid , Caaga Cable Jiid Chain, Chain Cable , Korontada Cable Chain,